Microsoft Corporation တွင် ‘လူဦးရေ ၅ သိန်းကျော်က အသုံးပြုသော ကမ္ဘာ့ ဘာသာစကား အားလုံးကို Microsoft Windows တွင် ထည့်သွင်းပေးရမည်’ ဆိုသည့် official policy ရှိပါသည်။ သို့သော် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မြန်မာဘာသာမှာ မပါဝင်နိုင်သေးဘဲ ရှိနေဆဲဖြစ်ရာ၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးမှ စုပေါင်း၍ မိုက်ခရိုဆော့ ကော်ပိုရေးရှင်းသို့ စာဖြင့် ထိရောက်အောင် မြန်မာ (ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း) ဘာသာ အသုံးပြုသူများ အားလုံးကိုယ်စား တောင်းဆိုမည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။လက်မှတ် ရေးထိုးသူ အသင့်အတင့် များလာပြီဆိုလျှင်၊ ဤတောင်းဆိုချက် အပြည့်အစုံကို စာရွက်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ပြီး၊ ဘီလ်ဂိတ်နှင့် စတီး ဘော်လ်မာ တို့ထံ ပေးပို့ပါမည်။ မိုက်ခရိုဆော့တွင် အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာ ပညာရှင်များမှလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိနာမည်အပြင်၊ မိမိ ကိုယ်တိုင် ဖြည့်စွက်ပြောဆိုလိုသည်များကိုလည်း အောက်တွင် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ဖြည့်စွက် ရေးသားနိုင်ပါသည်။မိမိအပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းလက်မှတ် ရေးထိုးပေးပါရန် သတင်းဖြန့်ပေးပါ၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် web page, blog များမှ အောက်ပါ URL သို့ link လုပ်ပေးပါ ဟုလည်း ကျွန်ပ်တို့မှ မေတ္တာရပ်ခံလို ပါသည်။http://myanmar-myanmar.net/microsoft/Microsoft Corporation has official policy to include language support for all languages over 500,000 users. For various reasons, Myanmar language has not been included in Microsoft Windows. Please sign this petition asking Microsoft to include Myanmar language in Windows in next versions. We will print out and send this list of requests and send to Bill Gates and Steve Ballmar of Microsoft Corporation.http://myanmar-myanmar.net/microsoft/ respectfullyzaw htut Views: 478
Comment by jokar on May 16, 2012 at 7:37pm ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုတွေပါ မြန်မြန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေဗျာ Comment by Moe Thet on November 23, 2011 at 1:18pm ၀င်းဒိုး၈ မှာမြန်မာစာစနစ်ပါဝင်လာပါတယ် မြန်မာအိုင်တီပရို ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်..။ Comment by Ye Thu on March 10, 2010 at 1:41pm It is OK. But, what if Microsoft finds out "Wow! That much people are using our OS without buying !!!!!" Will they make pirating their OS more popular among that language users? Just my opinion. For the rest, I support. Our circle characters would look decent on Windows. :) Cheers. Comment by saimyolwinoo on March 10, 2010 at 12:09pm ကျွန်တော်က တော့ ဒါကိုသဘောကျတယ်ဗျာ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အိုင်တီနဲ့ပါတ်သက်ပြီးပိုတိုးတက်လာမယ်လို့ထင်လို့ပါ လေ့လာချင်တာတွေကို ပိုပြီးတော့ ထိရောက်စွာနဲ့လေ့လာလို့ရတာပေါ့ ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး နားမလည်တာကိုလေ့လာချင်ပါတယ်ဆိုနေမှ နောက်ထပ်တခုကိုပြန်လေ့လာနေရအုံးမယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လေ့လာချင်တာကို မလေ့လာဖြစ်တော့ဘူးလေ ဒီအစီစဉ် ကိုသာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ကုမ္မဏီ က သဘောတူမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အများကြီးအဆင်ပြောလာမှာပါ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပါလို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ဒီအစီစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်စေချင်ပါတယ် ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လူတွေကောင်းစားဖို့ ပဲ လေ ဟုတ်တယ်မလား